Directory mpividy - tsenam-barotra B2B - Fampahalalana mividy - Alietc.com
Ny tsenan'ny B2B
B2B Vaovao sy tantara
Ampio ny vokatra
Eto eto Alietc isika dia manolo-tena hamorona tsena nomerika eran-tany izay manambatra mpanamboatra, mpamatsy ary mpividy, manampy amin'ny fametrahana fifandraisana mahasoa sy maharitra ary maharitra.
Ny lakile ho an'ny fahombiazana amin'ny maha-mpividy iray dia afaka mijanona amin'ny singa maromaro, mba hanamafisana kokoa ny fahombiazanao amin'ny Alietc, nametrahanay ity toro-làlana mpividy ity ianao hanampiana anao hisoroka ireo hadisoana mahazatra natao rehefa manandrana mividy vokatra.
Ny lakile hananganana laza tsara miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy vola dia ny fandoa vola haingana
Arakaraka ny ampiasanaoo Alietc, arakaraka ny ho tsapanao fa ny laza lazainao dia hisaona betsaka ary hanampy anao hanakaiky ny fifanarahana. Ny iray amin'ireo singa manakiana indrindra amin'ny lazanao amin'ny mpividy dia ny fomba hametrahanao haingana ny kaontinao amin'ny mpamatsy na mpamatsy azy. Mety ho nanaiky ny handoa 50% ambony ianao ary 50% amin'ny fandefasana. Mety ho efa nifanekena tamin'ny mpamatsy na mpanamboatra ianao fa mandefa kaonty ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nandraisana entana.
Na inona na inona teny ekenao aloa vola dia mifikitra aminy ary, raha te hamitraka fifandraisana maharitra ianao mpamatsy ary mpanamboatra, mandoa haingana noho ny mety nantenain'izy ireo mandoa vola.
Miorina amin'ny fahatokisana
Ny lohahevitra iraisana iray izay ho hitanao rehefa mampiasa ny sehatra Alietc dia ny fametrahan-dehibe ny fahatokisanay. Ny fahatokisana amin'ny raharaham-barotra dia saika fananana azy manokana, ary miaraka amin'ny laza tsara arahin'antoka amin'ny maha-azo itokisana azy dia hitombo be ny herinao hividianana anao. Ohatra, ny mpanamboatra dia mety manasa tolotra amin'ny vokatra amidiny ary mahaliana anao ilay vokatra. Alao sary an-tsaina raha toa ny mpanafika dia manana tolotra telo, roa avy amin'ny mpividy tsy misy laza, ary ny tolotrao, izay somary ambany kokoa, nefa fantatr'izy ireo fa raha toa ka mifanatrika aminao izy ireo dia mahazo karama nefa tsy misy olana, Ny tranga dia raha toa ka anao ny ny tolotra ambany indrindra, ilay izy no ekena satria hita fa mpividy atokisanay ianao.
Tena ilaina ny fifandraisana tsara
Hatramin'ny niandohan'ny fifanakalozana ara-barotra rehetra, tsara, mazava ary mazava tsy tapaka. Aza matahotra ny manontany momba ny mpamatsy na mpanamboatra fanontaniana momba ny vokatra (varotra) amidiny, anisan'izany ny fandaharam-panaterana, sns. Efa tara loatra ny mitaraina momba ny zavatra iray rehefa tonga ny baiko.
Mazava ho azy fa tsy tokony hifarana ny serasera raha vantany vao vita ny baikonao dia tonga ny entana ary tonga amin'ny fahafaham-ponao. Ampahafantaro ny mpamatsy na mpanamboatra fa faly tanteraka amin'ny zava-drehetra ianao ary manantena ny hanao raharaham-barotra indray tsy ho ela. Ampahany amin'ny fahombiazan'ny Alietc dia miankina amin'ny isan'ny fifandraisana tsara sy maharitra lava eo amin'ny mpividy, mpamatsy sy mpanamboatra.
Eto eto Alietc dia mankasitraka tanteraka izahay fa amin'ny maha-tontolo antsika an-tsena, tsy ny rehetra no hiteny ny fiteny mitovy. Satria zava-dehibe ny fifampiresahana tsara, izahay dia nitandrina ny lisitry ny mpandika teny izay afaka hanampy anao amin'ny serasera.
Fifandraisana amin'ny mpamatsy sy mpanamboatra
Satria tsy voatery ho lasa mpikambana ny mpividy mba hividy vokatra ao amin'ny Alietc, dia nanapa-kevitra izahay fa ny fomba azo antoka hanombohana ny fifampiraharahana dia ny fandalovantsika aloha. Na amidy amidy amin'ny vidiny maharitra ny vokatra na mpamatsy / mpamatsy dia manasa tolotra, tsy maintsy ny fifandraisana voalohany taminao Alietc.
Izany dia mba hialantsika amin'ny ‘spammers’ sy ny fanalavirana ny tsy fanitsian-tena. Rehefa afa-po izahay fa marina ny fanontanianao, dia homenay anao ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin'ny mpivarotra na mpanamboatra ary mety hitarika azy ireo mivantana ianao, tsy mila tafiditra ao Alietc mbola misy koa.
Azonao atao ny mampiasa ny milina fikarohana mahery anay mba hahitana ireo mpanamboatra na mpamatsy ny vokatra (tadiavinao) sy tadiavinao ny mpamatsy maimaimpoana.
Azonao atao ny mametraka tolotra momba ny vokatra rehetra voatanisa ho varotra ao amin'ny Alietc sehatra. Ho amin'ity vahaolana ity dia mila misoratra anarana amin'ny drafitra rehetra ianao.
Farany, azonao atao ny mametraka fangatahana vokatra, izay hazavainao ny vokatra (tadiavinao) hividianana sy izay vonona ianao handoa izany (izy ireo) - izay mpamatsy / mpamokatra izay afaka manome ny vokatra (s). ny tadiavinao dia hahazo fampandrenesana eo noho eo ny fangatahan'ny vokatrao ary avy eo mifandraika raha toa ny tombam-bidy arahin'izy ireo dia mahaliana azy ireo.
Raha mitady mividy vokatra ianao dia azo antoka fa tonga any amin'ny toerana mety. Alietc dia azo antoka fa "Aladdin's Cave" amin'ireo rehetra vokatra azo alain-tahaka na ny akora mety ho azonao eritreretina, ary ny maro izay mety tsy mbola fantatrao dia nisy.
Amin'ny tsenam-barotra B2B nomerika, Alietc dia natsangana tamin'ny tanjona tokana hampahafantarana ny mpividy amin'ny mpamatsy sy mpamatsy vokatra amin'ny vidiny mahavariana raha miantoka ny fenitra avo lenta. Ny ho hitanao koa dia, arakaraka izay tadiavinao ny mividy, mety hahita mpivarotra marobe ianao, na mpanamboatra na mpamatsy, izany dia midika fa maniry ny hanolotra anao vokatra amin'ny vidiny izy ireo mba hanombohana anao. inona no antenaina ho fifandraisana tsara sy maharitra
Tamin'ny alàlan'ny fampiasana be dia be ny fampiharana SEO nokendrena dia namorona tsena nomerika B2B tokana tsy misy vokatra amidy amin'ny vidiny manokana toa ny hitanao amin'ny sehatra toy ny eBay na AliBaba, fa mandrisika koa ny fifampiraharahana mivantana eo amin'ireo mpividy sy mpivarotra, Izy ireo dia samy mpikambana ao amin'ny sehatra Alietc, izay midika fa samy maniry mafy hanao asa ny roa tonta.
Ny zava-dehibe aminao dia ny mahatakatra fa manana fifehezana tanteraka ianao momba ny fomba sy izay ividiananao vokatra, araka ny haseho eto ambany.
Izay tokony hataonao manaraka
Rehefa avy nanao sonia tao amin'ny Alietc ianao dia afaka mamorona ny mombamomba anao.
Miangavy fotoana kely hamoronana sary mivaingana hisarika ny maso ho an'ny mpanjifa mety - mamorona torolàlana mahasoa amin'ny famoronana ny mombamomba anao Alietc izay azon'ny mpikambana ihany. Miaraka amin'ireo mpitari-dalana mpampiasa sarobidy hafa, ny torolàlana famoronana ny mombamomba anao dia hanampy anao hikapoka ny tany mihazakazaka ary hamonjy anao tsy handany fotoana tsy ilaina.
Farany, mety mila misoratra anarana amin'ny iray aminay ianao drafitra momba ny mpikambana, raha te-hametraka tolotra ianao na manampy fangatahana mividy vokatra.
Vantany vao nanao sonia tao amin'i Alietc ianao dia afaka manomboka ny fitadiavanao sy ny loharanon'ireo vokatra novidina.
Azo atao ny iray amin'ireto fomba telo ity:
Hikaroka sy mpamatsy serasera. Azonao atao ny mampiasa ny milina fikarohana mahery anay mba hahitana ireo mpanamboatra na mpamatsy ny vokatra (tadiavinao) sy tadiavinao ny mpamatsy maimaimpoana.
Mametraka bida. Azonao atao ny mametraka tolotra momba ny vokatra rehetra voatanisa ho varotra eo amin'ny lampihazo Alietc. Ho amin'ity vahaolana ity dia mila misoratra anarana amin'ny drafitra rehetra ianao.
Fangatahana mividy vokatra. Azonao atao ny mametraka fangatahana vokatra, izay hanaovanao mazava tsara ny vokatra (tadiavinao) hividianana sy izay vonona hiantoka azy ireo (ireo) - izay mpamatsy / mpamokatra rehetra afaka manome ny vokatra (na) vokatra hitady dia hahazo fampandrenesana eo noho eo ny fangatahan'ny vokatrao ary avy eo hanao fifandraisana raha ny vidiny tadiavinao no mahaliana azy ireo. Ho amin'ity vahaolana ity dia mila misoratra anarana amin'ny drafitra rehetra ianao.
Raha mbola manana fanontaniana ianao
Satria tsy nampiasa Alietc taloha ianao, mety manana fanontaniana fanampiny tianao hovaliana. Na inona na inona fanontaniana tianao hovaliana, eto izahay mba hanampy anao, marina izany mifandray ary hamaly avy hatrany isika.
Aza hadino fa: Mba hahazoana antoka fa ny olona rehetra izay mampiasa ny tsenam-bola Alietc dia manao izany amin'ny fanahy feno izay ampiasain'ity tsena ity, arakaraka ny haavon'ny maha-mpikambana anao, mety tsy maintsy mandoa lisitra kely ianao na sarany andoa-bidy. Ny tanjonay dia ny hanaisotra 'spam' sy mpampiasa tsy matotra ao amin'ny lampihazo, ary izany dia hita fa fomba mahomby indrindra. Manazava izany amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny fizarana mpikambana.
Alietc - Mihoatra lavitra noho ny tsena B2B
Vokatra momba ny toeram-pambolena - graveins, voankazo sns
Vokatra sakafo sy zava-pisotro vita amin'ny zava-pisotro sy vokatra
Fampidinana ao amin'ny toeram-pambolena - Zezika, Pesticides & Seeds
Masinina sy fitaovana fanodinana sakafo & sakafo
Vokatra trondro sy trondro
Fambolena - voninkazo, zavamaniry ary vokatra mifandraika amin'izany
Fiompiana, akoho amam-borona, hena ary vokatra biby
Vokatra lamba sy hoditra
Timepieces firavaka eyewear
Fiara sy kojakoja
Fikolokoloana tarehy sy fikarakarana manokana
Fitaovana sy kojakoja elektrika
Serivisy fanamboarana lamba
Fanomezana & asa tanana
Jiro sy jiro
Kitapo sy tranga enta-mavesatra
Fangatahana & fanontana
Vovoka sy plastika
Kiraro sy kojakoja
Kilalao sy fialamboly
Fanorenana sy trano
Mineraly sy metalyurgie
Zava-pisotro misy alikaola, paraky sy vokatra mifandraika amin'izany
Fampahalalana momba ny bara sy vokatra mifandraika
Copyright 2020 © Alietc.com B2B Marketplace, Zo rehetra voatokana. T & C - PP